Muxuu ka yiri Agaasima ciyaaraha kooxda Inter Milan Walter Sabatini heshiiska ay ku doonayaan Luka Modrić? – Gool FM
Muxuu ka yiri Agaasima ciyaaraha kooxda Inter Milan Walter Sabatini heshiiska ay ku doonayaan Luka Modrić?
(Inter) 11 Agoosto 2018. Agaasima ciyaaraha kooxda Inter Milan Walter Sabatini ayaa iska diiday inuu ka hadlo isku dayga ay ku doonayaan saxiixa laacibka khadka dhexe xulka qaranka Croatia ee Luka Modrić.
Walter Sabatini oo ku sugan haatan magaalada Madrid ee caasimada u ah dalka Spain waxaana la weydiiyay su’aal ah in Inter Milan ay dooneyso inay kaga faa’ideysato joogistiisa caasimada Spain si ay ugu qanciyaan Los Blancos heshiiska Luka Modrić.
Mas’uulkan ka tirsan kooxda Inter Milan ayaa u sheegay wargeyska “Calcio Mercato” ee dalka Talyaaniga “Waxaan halkan u joogaa kaliya ciyaarta”.
Si kastaba kooxaha Atletico Madrid iyo Inter Milan ayaa maanta oo sabti ah kuwada ciyaari doono garoonka Wanda Metropolitano ee caasimada Madrid ee dalka Spain kulan saaxiibtinimo ay ugu diyaar garoobayaan xili ciyaareedka cusub.
Sida laga soo xigtay saxaafada, kooxda reer Talyaani ayaa isku dayi doonta inay horumar ka sameeyaan heshiiska Luka Modrić, iyagoo kaga faa’iideysan doona joogitaankooda magaalada Madrid.
Unai Emery oo magaacabay 5-kabtan xiliciyaareed kaan! (Yaa kabtan noqon doona kulanka Man City?)
Barcelona oo qorshahaan adeegsatay si ay u kala dhex gasho Arsenal iyo Ousmane Dembele!